एमालेलाई कमजोर बनाउन गठबन्धन- हरिबोल गजुरेल - || यूथ फ्रन्टलाइन ||
२०७८ चैत्र १६, बुधबार ११:१४:००
प्रतिगमनका खतराहरू टरेका छैनन् । कायमै छन् । खतरा कायम रहँदासम्म गठबन्धनको आवश्यकता रहिरहन्छ । कांग्रेस पनि प्रतिगमनविरुद्ध लडेको दल हो । र, प्रतिगमनलाई निर्वाचनबाट फेरि परास्त गर्न काङ्ग्रेससहितका गठबन्धन बनेको हो ।
यस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिबीच हामी ( माओवादी ) के प्रतिगमनको पक्षधरसँग गएर मिल्ने त ? नैतिकताले दिन्छ ? सिद्धान्तले दिन्छ ? कम्युनिस्टको नाममा देशलाई प्रतिगमनमा लैजाने शक्तिसँग कसरी हुन्छ हाम्रो गठबन्धन ?
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रष्टसँग पार्टीको महाधिवेशनमा भनिसक्नु भएको छ त– वैचारिक अस्पष्टता भयो । अर्थात् विचारको विकास भएन । कटुवाल प्रकरण जस्ता घटना घटे । यस्ता घटनाले माओवादीलाई ठूलो क्षति पु¥यायो । र, कहिले मोहन वैद्य ‘किरण’, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’ त कहिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को दबाब र प्रभावमा परेर आफूलाई लागेको भन्दा फरक निर्णय गर्दा पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्यो भनिसक्नु भएको छ । अब म सच्चिने र तपाईंहरू पनि सच्चिनुपर्छ भन्नु भएको छ ।
अर्को कुरा गठबन्धन आवश्यक भइसक्यो । सामान्य स्थितिमा पनि गठबन्धन नभइ स्थिर सरकार नबन्ने भयो । त्यही भएर निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने अवस्थामा पुगेका हौँ । गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेपछि नतिजा पनि राम्रै हात पार्न सकिन्छ । अलग अलग भएर निर्वाचन लड्दा त्यस्तो नहुन सक्छ । र, फेरि ६/६ महिनामा सरकार ढाल्ने खेल हुन्छ । त्यसकारणले पनि गठबन्धन आवश्यक छ । गठबन्धन प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछिसम्म जान सक्छ ।